South Africa: "Tariro huru yemakore eMandela yakagadzirisa zvikuru" - TELES RELAY
HOME » pasi rose South Africa: "Tariro huru yemakore eMandela yakapa nzira yekuodza mwoyo"
South Africa: "Tariro huru yemakore eMandela yakapa nzira yekuodza mwoyo"
Musikana wevhoti anoenda kunzvimbo yake yekuvhota muGoli, South Africa, 8 May 2019. MICHELE SPATARI / AFP
Adrien Barbier, mumwe wevanyori vedu muJohannesburg, akapindura pamusoro pe WhatsApp kumibvunzo yako pamusoro pemasarudzo akawanda mukati Afrique du Sud uye mamiriro ezvematongerwo enyika uye ezvehupfumi zvenyika. Heano mamwe emibvunzo yako.
Tevera nyaya dzeAfrica: pamwe ne "World Africa" ​​pane WhatsApp!
Ndiyo South Africa iri pamucheto wekushamwaridzana kwevanhu here?
Adrien Barbier Izvo nguva dzose zvinonetsa kufanotaura hutano hwemagariro enyika ... Asi nenzira dzakawanda, sangano reSouth Africa ratova mumatambudziko. Zuva rimwe nerimwe kana zvakadaro, kune chiratidziro mukodhi, musha, guta, umo vanhu vanopesana nekushaikwa kwebasa revanhu. Muzhinji, vanovhara mumigwagwa uye vanopisa matairi. Vanogona dzimwe nguva kurwisa mabhizimisi anotorwa nevatorwa. Ichowo inzira yevarombo zvikuru kuratidza kusagutsikana kwavo uye zvido zvavo kune hurumende. Uye iri kure neutsva: chakanga chave chiito chekuita pasi pehutongerwe enyika.
Chii chinonzi sangano rezvematongerwe enyika reSouth Africa?
Iyo inhengo yeparamende: mutungamiri wenyika anosarudzwa neParamende, iyo inogonawo kumurambidza. Vatevedzeri vanosarudzwa pane urongwa hwematongerwo enyika pahutano hwepasi, uye kwete nehurumende seFrance. Nyika yacho yakakamurwa kuva mapurisa mapfumbamwe uye nharaunda imwe neimwe ine paramende uye mutungamiriri wehurumende. Musi weChitatu 8 May, vagari vemuSouth Africa vakasarudza vamiririri vavo vemunyika uye vehurumende kwemakore mashanu anotevera. Iyi sarudzo inongova nekamwe chete. Paramende inosarudza kusarudza mutungamiri, anogadza hurumende yake. Zvinotora vazhinji (201 deputies pa 400) kuti vasarudzwa. Pahutunhu hwepurovhinzi, imwe nhengo yeparamende inosarudza hurumende, iyo inogadza hurumende yake.
Seiko kusakanganiswa kwekutonga kweAfrica National Congress (ANC) kuchiita sarudzo yeDemocratic Alliance (DA) kana kuti Fighters for Economic Freedom (EFF)?
Mubvunzo wakanaka! I ANC inoramba iine simba mukati mevanhu vazhinji vemauto nokuti inoramba iine aura yayo yerusununguko. Urongwa hwehupanduki hwakaguma chete mu1994, uye mazhinji emakore anopfuura 50 anochengetedza zvakajeka makore iwayo anotyisa, kunyanya kusvika kumagumo, apo hurumende yakaoma. Nguva yevasarudzo inofanirwa neA ANC nokuti vechidiki vana chete kubva kune gumi vakanyoresa pamasarudzo ezvarudzo. Zvinotaridzikawo kuti Mutungamiri Cyril Ramaphosa akachengetedza sangano: kuyananisa nekubatana, anonyengedza kunze kweA ANC uye vazhinji vanogutsikana kuti ndiye murume anogona kusimudzira hupfumi.
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare Sarudzo muSouth Africa: ANC inoramba iine simba asi inoratidza zviratidzo zvekukundikana
Mukupikisa, kushorwa kunoramba kuchigadzikana kure neANC. Dhiyabhorosi, iyo yaimbova mapato evanhu vakuru vemauto ehurumende uye vatsigiri vanopesana nehutongerwe enyika, iri kutarisa kune humwe rutivi rwehuwandu hwevanhu uye ikozvino ndiyo yega isingarudzi muSouth Africa. Asi vakawanda vasati vatenda muhutano hwavo uye vanoramba vachigutsikana kuti vatsvene vari shure kwezviitiko. Mutungamiri weDaily, Mmusi Maimane, uyo ane zvose zvekufadza, haasi kuramba achifunga. Kune vamwe, haina kukwana uye hutungamiri. Izvo zvematongerwo enyika uye kupomerwa kwechisarura mune zvevhidhiyo zvakare zvinotambudza mufananidzo wepati.
IEFF, iyo inofanira kuva ndiyo chete yakagadziriswa yekuvandudza maranho ayo, irambe iri bato duku, rakatangira makore matanhatu akapfuura. Kana akadzorera Dhiyabhorosi, zvichave zvakanaka kare.
Pakati pevatsvene nevatema, ndeizhinji?
Maererano nehuwandu hwekuverenga, hunodzokera ku2011, vaWhite vakanga vari 9%, vaMads 76%, vasingakanganwi "Vara", ne9%, uye vaIndia, vane 3%.
Verenga zvakare South Africa: muCape Town, "Vara" vakadya
Chii chinotsanangura kusiyana kwemuhomwe pakati pevatsvene nemisha?
Mune shoko, kusarurana! Mukuwedzera pakurambidza huwandu hwemusiya hwekodzero dzezvematongerwe enyika, hurumende yakarongeka nenzira yekupa mabhizimisi machena ane basa rakasvibirira rekunyama. Mugumo wehutongerwe enyika uye uku kushandiswa kwakangoerekana kwakanganisa kushaya kwehuwandu hwemabasa (20% mu1994). Nelson Mandela anotsoropodzwawo nhasi, sezvo vanhu veSouth Africa vanofunga kuti hurumende haina kubatana nekusunungurwa kwezvemari: muchidimbu, kuti vashoma vashoma vakakwanisa kuchengetedza hupfumi. exchange of a peace change of government.
Mumakore achangobva kupfuura, South Africa inowedzerwa mune dambudziko risingaperi rezvemari rinotsanangurwa nedambudziko rezvemari rose reZ2008, kuwira mumutengo wezvinhu zvakagadzirwa, kuvharwa kwemigodhi yakawanda yakaita upfumi hwenyika, uye kunyanya kusarudzwa kwezvematongerwo enyika ezvematongerwo enyika eZuma (2009-2018), izvo zvakavhiringidza kuvimba nevashambadzi venyika. Pakupedzisira, kufanana nedzimwe nyika, South Africa inokanganiswa nemigumisiro yekudyidzana kwenyika uye nekukura kusina kukwana.
Verenga zvakare MuSouth Africa, makore makumi maviri namashanu shure kwekuguma kwehutongerwe enyika, "vapfumi bedzi vakasununguka"
Izvi zvinoreva here kuti kurambana kwepasarura hakuna kukwana zvachose?
Zvematongerwo enyika, hongu. Kusvikira 1994, vazhinji vemauto vakanga vasina kodzero dzezvematongerwe enyika dzakafanana nedzimwe marudzi, kunyanya kodzero yekuvhota. Pfuma, yakawanda zvakaoma. Dzidzo inenge isina kurema, kuitira kuti ruzhinji rwevanhu vekuSouth Africa rurege kubviswa mune zvekunze. Vafumi, kazhinji vachena, vave vapfumi, apo urombo hwawedzera. Iko ANC inotsoropodzwa zvikuru nokuda kwehuori uye chokwadi chokuti vashomanana chete vemadimusi vakabatana nechechi vakazviwanisa ivo pachavo. Tariro huru yemakore eMandela yakapa nzira yekuodza mwoyo kukuru. Asi vamwe vanoti hatisi kuronga mazana matatu emakore ekusaenzana mumakore makumi maviri nemashanu.
Chii chakakonzera kutadza kusingadzorwi mumakuta eAlexandra muGoli?
Uremekori ihurukuro yakaoma, asi kana ini ndichingwarira kuti ndive nekutarisa pamatope aya anotsvedza, kusakosha kwebasa uye kusagadzikana kwezvemari, mumamiriro ezvinhu ekusawirirana kwakanyanya, zvinokwidza vechidiki vakawanda kuenda kumabhanhire. Mune imwe nyika iyo mubairo mudiki ndeye 220 euros, kubvira 1er chete munaJanuary zvinogona kuva zvakakosha kubba kupfuura kushanda. Dzidzo iine dambudziko, sezvo vanhu vakawanda vasina zvikodzero. Kuwanda kwekushandisa kwemishonga, kunyanya nyaope, musanganiswa we cannabis uye heroin inodhura uye yakawandisa, inowedzera zvose izvi. Pakupedzisira, mapurisa anobatsira pasi pose. Panguva yehutongerwe enyika, mapurisa akaiswa mairi kuti adzivirire maguta matsvuku, saka ikozvino kuti nzira dzacho dzakaenzana zvakakwana, munhu wose haasi kudzivirirwa.
Verenga zvakare South Africa: kutsamwa kwekodhi yeAlexandra
Ko kudyidzana kwevaridzi veminda vakawanda kuchiri kukosha here?
Kutengeswa kwepanyika kusati kwambova musoro mukuru, asi usatenda avo vanofanotaura kuti "South Africa ichaguma seZimbabwe". Gore rakapera, Mutungamiri Ramaphosa akavimbisa kushandura Mutemo weMitemo kubvumira kudyara kwenyika pasina kubhadhara, asi akazoita kuti ave nechokwadi chokuti haina kukanganisa hupfumi - izvo zvaireva kusavhomora vatsvene varimi mubasa - uye akawedzera zviratidzo panguva yemushandirapamwe wekusimbisa musha wemuchena.
Adrien Barbier (Johannesburg, tsamba)
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/10/afrique-du-sud-le-grand-espoir-des-annees-mandela-a-laisse-place-a-une-grande-deception_5460610_3212.html?xtmc=afrique&xtcr=5
Anopomerwa kuti "kuurayiwa" paMoussa Sidibé: Issa Tangara akatongerwa kugara mujeri
India: Hurumende Inofanira Kupa Hanzvadzi Vanoshevedza Kuvandudza Kwenguva refu- India News